Digital Patrika – कोटेश्वर पूर्वको यातायात : सिन्डिकेटधारी र सिन्डिकेटविरुद्ध चलिरहेको संघर्ष ?
कोटेश्वर पूर्वको यातायात : सिन्डिकेटधारी र सिन्डिकेटविरुद्ध चलिरहेको संघर्ष ?
Apr 04, 2018digitalpatrikaडिजिटल खोजी, समाज0
काठमाडौं । सरकारले सिन्डिकेट तोडिएको घोषणा गरेपछि अरनीको राजमार्गमा चल्ने १२ वटा यातायात व्यवसायी समितिले बस चलाएका छैनन् ।
मयुर यातायातलाई काठमाडौं बनेपा रुटमा बस चलाउने अनुमति दिएकोप्रति अवरोध गर्दै आएका १२ वटा समितिले बुधबारबाट ग्रामीण र शहरी दुवै भेगका बस चलाउन छाडेका हुन् । कोटेश्वर पूर्वका समितिले अरनिको राजर्मागमा नियमित रुपमा चल्ने बस नचलाएपछि यात्रु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले सिण्डिकेट कायम हुनुपर्ने बताउँदै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका घोषणा गर्दै ग्रामीण र शहरी दुवै भेगका बस बन्द गरेका हुन् । जसबाट भक्तपुर काठमाडौं यातायात सेवा बुधबार विहानैबाट प्रभावित बनेको थियो ।
काभ्रे र भक्तपुरका सडकमा एकाधिकार कायम गरेका समितिहरुले सेवा अवरुद्ध पर्दा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । नियमित कामका लागि हिँड्ने यात्रुहरु, ग्रामीण भेगमा पुग्नु पर्ने यात्रुहरुलाई यातायात सुविधा नहुँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ ।
सडकमा सवारी साधन कम भएपछि यात्रुको चाप बढेको छ । बुधबार अरनीको यातायात समितिले आन्दोलनमा आफुहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको तर गाडी चलाइरहेको बताएको छ ।
काठमाडौं धुलिखेल रुटमा नयाँ यातायातालाई पनि इजाजत खुल्ला
अरनीको राजमार्ग अन्तर्गतका १२ समितिले बस सञ्चालन गरेपछि बुधबार नै सरकारले अन्य व्यवसायी तथा कम्पनीलाई काठमाडौंबाट धुलिखेलसम्मको रुट इजाजत लिन आउन आह्वान गरेको छ । यात्रुको चाप हुने समयमा बसलाई रोकेर राखेपछि यात्रुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात विभागले धुलिखेसम्म अन्यलाई पनि रूट इजाजत दिने निर्णय गरेको हो ।
ब्यवसायीको इच्छाअनुरुप अस्थायी या स्थायी दुबै इजाजत दिने निर्णय गरि धुलिखेलसम्म बस चलाउन चाहानेले इजाजत पाउने यातायात ब्यबस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले जानकारी दिए ।
विभागले सवारीको रुट इजाजत खुल्ला गरेपछि बुधबार नै यातायात व्यवस्था विभागले ८ वटा कम्पनीलाई धुलिखेल र पनौतीसम्मको अस्थायी रुट परमिट दिएको छ । काभ्रे र भक्तपुरका बस व्यवसायीहरुलाई काउन्टर दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
व्यवसायीहरुको आन्दोलनपछि साझा यातायात, अन्नपूर्ण यातायात, सिटि मेट्रो यातायात, मध्ये उपत्यका यातायात र मयुर यातायातले धुलिखेलसम्म नै सेवा दिन थालेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताएका छन् । बुधबारदेखि नै ८ वटा यातायात कम्पनीहरुले अस्थायी रुट लिएर गाडी चलाउन थालेका छन् । र विहिबारबाट महानगर यातायातले पनि सो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने उनले बताएका छन् । सरकारले सो रुटमा चल्ने बसलाई सुरक्षा पनि दिने महानिर्देशक भट्टराइको भनाई छ ।
सिन्डिकेटवाला बसहरुको रुट इजाजत खारेजीको प्रक्रिया सुरु
सरकारले सिन्डिकेटको पक्षमा बस्न गरिएका बसहरुको रुट इजाजत खारेजीको प्रक्रिया पनि अघि बढेको बताएको छ । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम जायज नभएको भन्दै विभागले सिन्डिकेटको पक्षमा रहेकाहरुको मागको सुनुवाइ गर्न नसकिने र उनीहरुको रुट खारेजी गर्ने जनाएको छ ।
चैत १ गतेबाट कोटेश्वर हुँदै बनेपासम्मको रुटमा २४ वटा सुविधा सम्पन्न गाडी संचालनमा छन् । सार्वजनिक बस चढ्ने यात्रुहरुले भने नागरिकलाई सहजरुपमा आवात जावत गर्नका लागि सुविधा सम्पन्न बसहरु भित्रनु स्वागत योग्य भएको बताउँदै आएका छन् । जसको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् ११ समितिहरु । यात्रुलाई मार पर्ने गरी सवारी साधन नै बन्द गरेर आफैलाइ घाटा हुने काम गरिरहेका छन् सिण्डिकेटवाला १२ ब्यबसायीहरु । सुविधाभन्दापनि सडकमा एकाधिकार जमाएर अन्य सेवा प्रवेश गर्न मनाही गरेका उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउनु जरुरी छ ।